Njem njem ime obodo na Galicia: site na Mariña Lucense na Valdeorras | Akụkọ Njem
Ingga ime njem nlegharị anya na Galicia bụ ụzọ ọzọ ịmara mpaghara mara mma nke ugwu Spain karịa ịga leta obodo ukwu ya. N'ihi na, ọ bụrụ na ndị a mara mma na ihe ncheta, ndị Galicia ime obodo Ọ na-enye ọdịdị mara mma na ọdịiche dị n'etiti ugwu na oke osimiri nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị.
Obodo ndi di na elu ugwu, obodo ndi azu na ebe ha nwere nzuzu bu ihe nile ichotara ime ime njem ime obodo na Galicia. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndụmọdụ anyị, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Idyllic ebe maka ime njem nlegharị anya na Galicia
1.1 Na RIbeira Sacra
1.2 Ndị Ancares
1.3 El Ribeiro, njem nleta ọzọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme njem nlegharị anya na Galicia
1.4 Ndị Mariña Lucense
1.5 Usọ osimiri nke Ọnwụ ma ọ bụ da Morte
1.6 Mpaghara nke Valdeorras
Idyllic ebe maka ime njem nlegharị anya na Galicia
Anyị ga-amalite ụzọ anyị site na ime obodo Galicia na-eleta ihu ala mara mma nke Ribeira Sacra wee gbanwee ógbè na ebe nkiri. Ka anyị bido njem anyị.
Dị ka anyị gwara gị, mpaghara a, nke dị n'etiti ugwu nke mpaghara Orense na ndịda nke Lugo, nwere oke ọdịda ya. N'ime ndị a Sil canyons, nke etiti ụzọ nke osimiri a na kwa meander nke Cubela.
Ọwa mmiri ahụ na-agafe n'etiti nnukwu mgbidi ugwu ma ị nwere ike ịnyagharịa ya site na catamaran. Ma tụgharịa uche na nnukwu ala site na echiche enyere maka nzube a.
Ke adianade do, na mpaghara, nke bụkwa ama maka ya mmanya, ị nwere ike ịchọta akụkọ ihe mere eme obodo dị ka Monforte de Lemos, ya na ebe obibi ndị Juu pụrụ iche na obodo ochie. Ma na ihe ncheta okpukpe dị ka ebe obibi ndị mọnk nke San Vicente del Pino na ndị nkịtị dị ka ndị dị ebube ụlọ akwụkwọ nke Lady anyị nke Antigua, emere baptism dika "the Galician Escorial" ma maka uzo Herrerian na oke ya di egwu.
Mahadum nke Lady anyị nke Antigua na Monforte de Lemos
Mpaghara a di n'etiti etiti akwa Navia, n'ime Asturias, na Sil, na Galicia. O nwere obosara ndọtị n'ihi na, na mgbakwunye, ọ na-aga site n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Lugo ruo mgbe Leonese Bierzo. Ọ bụ ihe gbasara a ebe ugwu ugwu nke jisiri ike chekwaa ọdịnala ya.
Ihe kachasị mara ha bụ ihe a na-akpọ palloza. Ọ bụ ajụjụ nke owuwu nke oval ma ọ bụ okirikiri osisi nwere mgbidi dị ala ma kpuchie ya n'elu ụlọ nke ụdị conical nke ejiri rye mee. Mbido ya bụ tupu Roman, karịa Celtic karị, ha jikwa ya rụọ ọrụ ruo mgbe narị afọ nke XNUMX.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụ ụtọ ụlọ ndị a dị egwu, ịnwere ike ịga njem dịka ọmụmaatụ Cebrero, obodo Lugo nke dị elu karịa mita XNUMX. Ọ bụ obodo mbụ nke Santizọ Santiago na Galicia na ụka Santa María tupu Romanesque amalitekwa.
El Ribeiro, njem nleta ọzọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme njem nlegharị anya na Galicia
Mpaghara a di na mpaghara Kpee ekpere ma nwee isi obodo ya Ribadavia. Ọtụtụ osimiri dị ka Miño ma ọ bụ Arnoia na-asa ya ma bụrụkwa nke ama maka ya mmanya. N'ezie, ị nwere ike ịga leta otu n'ime ọtụtụ wineries ya.
Ọ dịkwa mma ịnọ na otu n'ime ọtụtụ ya spas. Ma ọ bụkwa mpaghara jupụtara na ihe ncheta. Otu n'ime ha dị egwu Ebe obibi ndị mọnk Trappist nke Santa María la Real de Oseira, onye mmalite ya malitere na narị afọ nke XNUMX na nke ụka ya nwere ọdịdị ogival Romanesque.
Maka akụkụ ya, na Ribadavia ị nwere ike ịhụ nnukwu ụlọ nke Sarmiento; obodo ochie ahu nke nwere ebe ndi Ju no; pre-Romanesque uka nke Saint Xes de Francelos na nnukwu ihe owuwu mejupụtara Ebe nsọ nke Nwanyị Nwanyị nke Portal na Chọọchị Santo Domingo. N'ikpeazụ, na Sierra del Suido ị nwere ike ịhụ ihe ndị ọzọ dị iche iche: ụlọ ndị a. Ha bụ obere okwute na ahịhịa ọka ndị ọzụzụ atụrụ ji echebe onwe ha pụọ ​​na oyi.
Ndị Mariña Lucense
Dị ka aha ya na-egosi, ọ na-ekpuchi warara nke ụsọ oké osimiri nke ógbè Lugo nke ahụ na-aga site Ribadeo elu Vicedo, ihe dị ka. Nnukwu kpakpando nke mpaghara a bụ Oke osimiri Katidral, otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya dị na ime obodo na Galicia.
A na-ahụ ihe ncheta a na parish nke Devesa, nke ndị kansụl nke Ribadeo. Ma ihe mejuputara ya bu oke nkume nwere arched na dika nke na-efe efe buttresses dị na nnukwu ụlọ nsọ Gothic. Nakwa site na ọgba na paseji corridor n'etiti nnukwu okwute. Ọ bụrụ na ị gaa na ya, ị ga-agarịrị mgbe ebili mmiri na-adịghị, ebe ọ bụ oge kacha mma iji hụ ịdị ebube ya.
Mana osimiri Catedrales abụghị naanị ihe na-adọrọ mmasị na Mariña Lucense. Na Ribadeo ị nwere ụlọ ndị mara mma nke India dị ka ndị a Towerlọ elu Moreno na ọnụ mmiri nke ọnụ ala Eo. Maka akụkụ ya, na Cervo ị nwere ike ịga na ebe ngosi ihe mgbe ochie raara nye akụkọ ihe mere eme Sargadelos ceramik; na Nursery bu Carlos V ọnụ ụzọ ámá na Xove ọtụtụ ogige Celt dị ka nke ahụ illa y Igbe kandụl.
Usọ osimiri nke Ọnwụ ma ọ bụ da Morte
Ugbua na mpaghara nke La Coruña ị nwere ebe ọzọ kachasị maa mma n’ime ime obodo Galicia. Ọ bụ Costa da Morte nke gụnyere mpaghara ọdịda anyanwụ nke ala na Europe. Ọ dị na Cape Fisterra, ebe mara mma nke na-enye echiche dị egwu nke ụsọ oké osimiri n’onwe ya na ụsọ mmiri ya jupụtara na ya na ọdịda anyanwụ pụrụ iche.
Costa na Morte
Ma ọ bụkwa mpaghara ọgaranya megalithic foduru dị ka umuaka nke Dombate na Castro de Borneiro. Ihe a niile n’echefughi obodo nta ịkụ azụ na-eme ya. Ọmụmaatụ, Camarinas, Camel, Muxia ma ọ bụ Muxía y Nchịkọta. Na nkenke, ókèala jupụtara na akụkọ ifo na akụkọ ifo ndị anyị na-adụ gị ọdụ ileta.
Mpaghara nke Valdeorras
Anyị gwụchara njem nlegharị anya ime obodo anyị na Galicia na mpaghara Valdeorras, nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke mpaghara Kpee ekpere. Ọ bụkwa ala na-eme nri na mmanya, ma ọ dịkwa ebube dị ka Eke Park nke Sierra de la Enciña de Lastra, ebe ị ga-ahụkwa oge ochie.
Mpaghara ya kachasị mkpa bụ Hipgbọ mmiri Valdeorras, nke dị n'akụkụ miri emi nke ndagwurugwu Sil. Obodo a nwere ọtụtụ ụlọ mara mma, ụfọdụ ụlọ ọgbara ọhụrụ dị ka cha cha na ọtụtụ akwa mmiri roman dị ka onye na-agafe osimiri Galir. Banyere iwu okpukpe, pụta ìhè na ụka nke san mauro, onye na-elekọta obodo ahụ. Na nke a, a na-asọpụrụ ihe oyiyi osisi nke Santo Cristo Nazareno, nke, dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, achọtara na osimiri ahụ enweghị ike ịkpụ ya.
Na mmechi, anyị atụpụtala ụzọ isii mara mma ị ga-eme ime njem ime obodo na Galicia. Ọ dịghị nke ọ bụla n’ime ha ga-emechu gị ihu n’ihi na ha niile nwere ebe nkiri pụrụ iche na nke a na-agaghị echefu echefu. Amaja ịmata ebe ndị a nke kpokọtara Galicia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ime njem ime obodo na Galicia